Shacabka Baydhabo oo lagu amray iney baneeyaan guryaha danta guud.
Monday January 02, 2017 - 13:06:16 in Wararka by Super Admin
Booliska Maamulka Koofur Galbeed ayaa sheegay in ay xoog kula wareegayaan guraha u muuqda in lagu qaban karo danguud ee ay shacabku leeyihiin.
Korneyl Mahad C/Raxmaan oo ah Taliyaha BooliskaGobalka Baay ayaa sheegay in qof kasta oo ka mid ah Dadka Baydhaba ay muhiim tahay in uu ogaado go’aanka Maamulka Koonfur Galbeed iyo Booliska maamulkaba.
Waxaa uu sheegay in Dadka magaalada loo baahanyahay in la xaqiijiyo amnigooda si taas loogu guuleystana ay ku xiran tahay rugaha muhiimka ah ee laga sugi karo amniga Magaalada Baydhaba in ay gacanta ku dhigaan maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa uu sheegay in dhisme kasta oo ku yaalla goobtii ay Booliska u arkaan in lagu qaban kari danguud xoog lagula wareegayo Maamulkanasi loogu shaqeeyo Danta guud sida uu hadalka u dhigay.
Dadweynaha ayuu uga digay in ay ku doodaan milkiyadda dhulka ay la wareegto Dowladda,waxaana uu sheegay in shuruud la’aan ay Booliska iyo Maamulkaba la wareegayaan Dhismayaasha.